I-Tropical Chic Condo ne-Panoramic View Balcony - I-Airbnb
I-Tropical Chic Condo ne-Panoramic View Balcony
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Alexander
Bheka ngaphesheya kwezihlahla ngasemanzini asuka kuleli khaya eliseduze. Indawo yokuhlala ifaka amapulangwe, amafasitela aluhlaza okotshani, ukusuka phansi kuya ophahleni, kanye nokufinyelela ezikhungweni ezabiwe okubandakanya ichibi le-infinity nezindawo zokuphumula ezingaphandle.
Igumbi lokugeza elihlangene nelokulala, Umbhede omkhulu, Uvulandi
4.90 (izibuyekezo ezingu-123)
I-Alamar resort iseduze neLa Cruz. Lesi sakhiwo sisedolobheni elincane elibukekayo eline-marina, izindawo zokudlela ezinhle, nezitolo eziseduze. Kukhona futhi imakethe yomlimi edumile ngamaSonto phakathi kukaNovemba no-April.